Sesibutholile ubulungiswa, kusho abazali baReeva | News24
Sesibutholile ubulungiswa, kusho abazali baReeva
eGoli - UBarry noJune Steenkamp bathi sebebutholile ubulungiswa nokuthi indodakazi yabo uReeve eyabulawa yisoka layo isizolala ngokuthula.
La bazali asebedlule esimweni esinzima kakhulu kuqulwa icala lokubulawa kwendodakazi yabo, basho lokhu ngosizo lommeli wabo uTania Koen.
Bathi ithemba labo kwezomthetho liqinisekiswe yiNkantolo eNkulu yokuDluliswa kwamaCala eguqule isigwebo sombulali wendodakazi yabo u-Oscar Pistorius sisuka eminyakeni eyisithupha saba yiminyaka eyishumi nantathu.
OLUNYE UDABA:Inkantolo yelule isigwebo sika-Oscar Pistorius ngecala lokubulala
UKoen uthe abakwaSteenkamp sekumele bagxile enhlanganweni iReeva Steenkamp Foundation, abayisungulela ukuqhubeka nomsebenzi owaqalwa yile ndodakazi yabo ukuze bezokwazi ukuqala nohlelo lokuxola ngakho konke.
UReeva washona ngosuku okwakumele ayokwethula ngalo inkulumo mayelana nokuhlukumezeka kwezingane nabantu besimame, kubika iThe Citizen.
"Isigwebo esehliswa yiNkantolo eNkulu ngecala lokubulala sibekwe eceleni, ummangalelwa usezohlala iminyaka engu-13 nezinyanga ezinhlanu ejele," kusho iJaji uLegoabe Willie Seriti ngoLwesihlanu.
Uthe empeleni uPistorius bekumele agwetshwe iminyaka engu-15 ebhadla ejele, kepha inkantolo i-SCA iyakuqonda ukuthi lo msubathi ubeseyidonsile ingxenye yesigwebo sakhe.
UMbuso wafaka isicelo sokuba kuguqulwe isigwebo seminyaka engu-6 esanikezwa uPistorius.